मौसम परिवर्तनले प्राकृतिक छनौट र जीवित चीजहरूको विकासलाई असर गर्छ हरियो नवीकरणीय
मौसम परिवर्तनले प्राकृतिक चीजहरू र जीवित चीजहरूको विकासलाई असर गर्छ
हाम्रो इकोसिस्टममा, सबै जीवित चीजहरूले प्राकृतिक चयन भनिने प्रक्रिया अनुसरण गर्छन्। यस प्रक्रियाले निर्णय गर्छ कि कुन जीन जीवित प्राणीहरूको बाँच्नका लागि सबैभन्दा लाभदायक हो र अनुकूलनमा "सुधार" गर्दछ।
मौसम परिवर्तन र सम्पूर्ण विश्वमा यसको विनाशकारी प्रभाव, प्राकृतिक चयन को यो प्रक्रिया लाई पनि असर गर्न सक्छ, जीवहरूको विभिन्न विकासवादी पथको परिमार्जन गर्न को कारण।
1 प्राकृतिक छनौट के हो?
2 प्राकृतिक चयन र मौसम परिवर्तन
3 घटेको वर्षा र बढेको खडेरी
4 इकोसिस्टममा परिवर्तन
प्राकृतिक छनौट के हो?
जलवायु परिवर्तनले कसरी प्राकृतिक चयनलाई असर गर्छ भनेर पूर्ण रूपमा बुझ्न हामीले यो सबै के हो भनेर जान्नुपर्दछ। प्राकृतिक चयन प्रक्रिया हो जसद्वारा एक प्रजाति यसको वातावरणमा अनुकूल हुन्छ। विकासवादी परिवर्तन हुन्छ जब विशेष सुविधाहरू भएका व्यक्तिको जनसंख्याका अन्य व्यक्तिको तुलनामा उच्च अस्तित्व वा प्रजनन दर हुन्छ र यी सम्पदा आनुवंशिक विशेषताहरू तिनीहरूको वंशमा पार गर्दछन्।
एक जीनटाइप जीवहरूको समूह हो जुन एक विशिष्ट आनुवंशिक सेट साझा गर्दछ। त्यसकारण, यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा, प्राकृतिक चयन बाँच्न र बिभिन्न जीनोटाइपहरू बीच प्रजननमा लगातार भिन्नता हो। यो हामी प्रजनन सफलता भन्न सक्छौं।
प्राकृतिक चयन र मौसम परिवर्तन
पत्रिकामा प्रकाशित एक अध्ययन विज्ञान गत हप्ता प्रकाशित गरिएको तर्क छ कि प्राकृतिक छनौटको यस प्रक्रियामा विश्वव्यापी परिवर्तनहरू तापमानको तुलनामा वर्षाबाट बढी निर्देशित छ। किनभने जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी स्तरमा वर्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दछ, यसले प्राकृतिक छनौटको यो प्रक्रियालाई पनि असर गर्न सक्छ।
यद्यपि जलवायु परिवर्तनको इकोलोजिकल परिणामहरू बृद्धि भई राम्रोसँग अभिलेख राखिएका छन्, जलवायु परिवर्तनको विकास प्रक्रियामा हुने अनुकूलनलाई मार्गनिर्देशन गर्ने अज्ञात छ ”, विज्ञानमा प्रकाशित लेखले भन्छ।
किनकि यो एकदम जटिल काम हो, वैज्ञानिकहरूले गएका थिए र पछिल्लो दशकहरूमा गरिएको अध्ययन पछाडिको ठूलो डाटाबेस प्रयोग गर्नुपर्‍यो। यस डेटाबेसमा जनावरहरू, बोटबिरुवा र अन्य जीवहरूको विभिन्न जनसंख्या, साथै बाँच्न र पुनरुत्पादित गर्ने तिनीहरूको क्षमताको बारेमा अध्ययन गरिएको छ।
घटेको वर्षा र बढेको खडेरी
एक परिवर्तनशील जुन प्राय: प्राकृतिक चयनलाई प्रभावित गर्न सक्दछ वर्षा प्रणाली। यदि तिनीहरू घट्छन्, खडेरी बढ्छ, दुवै समयमा र आवृत्तिमा। त्यसपछि, खडेरीमा बृद्धि भएकोले धेरै क्षेत्रहरू सुख्खा र मरुभूमि पनि हुन्छ। यद्यपि अन्य क्षेत्रहरूमा वर्षा बढ्दै गइरहेको छ र त्यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन् जुन क्षेत्र अधिक आर्द्र क्षेत्र बन्छ।
जे भए पनि, यसले प्राकृतिक चयन को ढाँचा असर गर्दछ। त्यो हो, जीवहरूको बिभिन्न प्रजातिहरूको विकास प्रभावित छ किनकि प्रजातिको जीन मात्र परिवर्तन गर्दैन, तर बाह्य एजेन्ट (मौसम) पनि परिवर्तन गर्दछ। मौसममा भिन्नताहरू, जस्तै बढि तापमान, वायु शासन, वर्षा, इत्यादि। तिनीहरूले परिवर्तनहरूलाई प्रभाव पार्दछन् जुन प्राकृतिक जीवनीहरूले प्राकृतिक चयन प्रक्रियाको परिणामका रूपमा भोग्न सक्छन्।
इकोसिस्टममा, दीर्घकालीन परिवर्तनहरू हुन सक्छन् जुन विभिन्न प्रजातिहरूको अनुकूलन गर्न "मार्जिन" हुन सक्छ र नयाँ परिदृश्यहरूको सामना गर्न जीवित रहन सिक्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, वर्षाको ढाँचामा परिवर्तनले विभिन्न जीवहरूको खाद्य स्रोतलाई असर गर्न सक्दछ। त्यो हो, प्रजातिहरू जुन केहि खानाहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै शाकाहारीहरू, वर्षाको बृद्धिका कारण बोटको आवरणमा कटौतीले असर गर्न सक्छ।
यसैले वातावरणीय परिवर्तनको प्रभावहरू जान्नु र प्राकृतिक छनौटको विकासवादी प्रक्रियासँग यसको सम्बन्ध जान्नु इकोसिस्टमको कामकाजमा परिवर्तन जान्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यस तथ्यको कारण छोटो अवधिमा भारी वर्षाको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ जसले चयन ढाँचामा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्न सक्छ।
जसरी मैले पहिले टिप्पणी गरें, ईकोसिस्टममा परिवर्तन हुने गतिमा आधारित। प्रजाति नयाँ परिस्थितिमा अनुकूल हुन सक्छ वा हुन सक्दैन। जे होस्, के इन्कार गर्न सकिँदैन भन्ने हो कि जलवायु परिवर्तनले विश्वभरि जीवित प्राणीहरूको अनुकूलन परिवर्तन गर्न पर्याप्त क्षमता रहेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » वातावरण » मौसम परिवर्तनले प्राकृतिक चीजहरू र जीवित चीजहरूको विकासलाई असर गर्छ
तपाइँको पुरानो haha भन्यो
अर्कोको मलाशयमा पक्कै पनी पहिलो फोटोमा गजेल आउँदैछ
तपाइँको पुरानो haha ​​लाई जवाफ दिनुहोस्
के हो, यो कसरी उत्पन्न हुन्छ र के प्रयोग गर्दछ फोटोभोल्टिक सौर ऊर्जासँग
सौर छतको साथ राजमार्गहरू